SAWIRRO XUL AH: Soomaaliya oo si weyn loogu xusay maalinta nabadda iyo Isboortiga – Gool FM
(Muqdisho) 07 Abriil 2017Munaasibad aad u balaaran oo lagu xusayay Maalinta dunida looga dabaaldego isticmaalka cayaaraha ee nabadaynta dunida iyo maalin looogu magac daray cayaartoyda Soomaaliyeed ayaa shalay ka dhacday garoonka Banaadir ee magaalada Mogadishu.
Waxaa ka soo qayb galay in kabadan kun cayaartoy oo wiilal iyo gabdho isugu jiray kana kala socday kooxaha hoos taga xiriirada ka dhisan Soomaaliya, degmooyinka gobolka Banaadir, iskuulada, Jaamacadaha ciyaartoydii hore iyo mas’uuliyiin ka socotay wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga oo ay hoogaamineyso Khadiijo Maxamed Diiriye iyo maamulka Gobolka Banaadir.
Ciyaartoyda ayaa socod ku soo maray garoonka iyadoo koox walba ku la bisan dareeska ay caanka ku tahay iyo astaan u gaar ah.
Masuuliyiintii goobta ka hadashay ayaa si isku mid ah u sheegay in ay si weyn ugu faraxsan yihiin xuska maalinta Nabadda iyo Isboortiga iyo maalinta ciyaartooyda Soomaaliyeed, waxaana halkaasi lagu bixiyay koobabkii ay ku guuleysteen wiilasha kubadda gacanta Hodan iyo gabdhaha kubadda Koleyga Warta Nabadda iyadoo si lamid ah koobab la guddoonsiiyay degmooyinkii soo galay booska labaad ee Shibis iyo Xamar Weyne.
Sikastaba qaban qaabada xafkaddaan ayaa waxaa iska kaashada Wasaaradda Dhalinyarada iyo Isboortiga iyo guddiga Olombikada Soomaaliyeed ee GOS, waana mid ka heersareysa bandhigii sanadihii lasoo dhaafay.